के हो कुंडलिनी योग ? जान्नुहोस् यसका फाइदा र गर्ने तरिका ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
के हो कुंडलिनी योग ? जान्नुहोस् यसका फाइदा र गर्ने तरिका !
पछिल्लो समयमा जनमानिसबीच योगको प्रभावकारीता बढ्दै गइरहेको छ । योग भनेको योग एक प्राचीन जीवन पद्धति हो, जसमा शरीर, मन र आत्मालाई सन्तुलन गर्ने गर्दछ ।
वास्तवमा योग आध्यात्मिक भन्दा पनि बढी बैज्ञानिक छ । योगको अर्थ ‘एकता’ वा ‘जोड्न’ हो । साधारण भाषामा भन्नु पर्दा योग शरीर, मन र मस्तिष्कलाई एकाकार गर्नु हो । व्यक्तिगत चेतना वा आत्मालाई सार्वभौमिक चेतना तर्फ लानु हो ।
योगले शरीर स्वस्थ राख्न, मनको चञ्चलता कम गर्न र आत्मामा उर्जा थप्न योगले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । शारीरिक र मानसिक तनाव योगासन, प्रणायाम र ध्यानको माध्यमबाट ठीक गरिन्छ । योग बच्चा, बुढा, महिला, पुरुष र हरेक उमेरका मानिसले गर्न सक्छन् ।
कुंडलिनी योग के हो?
मानव शरीर भित्र ७ प्रकारको चक्रको बारेमा बर्णन गरेको पाइन्छ ।मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा र सहस्रार चक्र जुन मेरुदन्ड हुन्छ ।कुंडलिनी योग ध्यानको एक माध्यम हो । जसले शरीर, मन र ज्ञानेद्रियहरुलाई बलियो बनाउँछ । यो योगले शरीरको सबै नशाहरुमा रगतको प्रवाहलाई नियन्त्रिल रुपमा संचालन गर्दछ ।
ध्यानमा बस्दा मुलाधार चक्रबाट विस्तारै सहस्रार चक्र जागृत हुन थाल्छ । यी शक्तिहरु जागृत भएर मस्तिष्क तर्फ बढ्दै शरीरको सबै चक्रलाई क्रियाशील बनाउँछ । अन्त्यमा कुंडलिनी सक्रिय हुन्छ ।
यही कुंडलिनी हाम्रो शरी, भाव र विचारलाई प्रभाव पार्दछ । कुंडलिनी जागरणको लागि हाम्रो शरीरमा भएको ७२ हजार नाडीयाँ शुद्ध र पुष्ट हुनु आवश्यक छ ।
-कुंडलिनी योगले नकारात्मक उर्जालाई सकारात्मक उर्जामा परिवर्तन गर्दछ ।
-कुंडलिनी योगले मानसिक तनावबाट मुक्त गर्नुको साथै यो योगले रतन्धो जस्ता आखाँको समस्याबाट पनि छुटकारा मिल्छ ।
-कुंडलिनी योगले पाचन प्रणाली, रक्त संचारलाई नियन्त्रण गर्दछ ।
-घुम्रपान र मद्यपान जस्ता नशालु पदार्थको सेवनको लतबाट पनि मुक्त बनाउँछ ।
– ज्ञानेन्द्रियहरु बलियो बनाउछ ।
-आत्मविश्वास बढ्नुको साथसाथै चञ्चल मनलाई पनि शान्त राख्न मद गर्छ ।
योग गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम समय भनेको विहानको समय हो । सुर्योदय पुर्व योग गर्नु उत्तम मानिन्छ । कुंडलिनी योग कसरी गर्ने तरिका-
– त्यसपछि दिमागलाई स्थिर बनाएर दुबै आखिभौको वीचको भागमा ध्यान केन्द्रित गर्नु ।
कुंडलिनी योगले रोगप्रतियोधक शक्ति पनि बढ्छ ।कुंडलिनी ध्यान त्यति सरल कार्य होइन । यस्को लागि केही विधि नियमहरु छन् । वीना गुरुको मदतले कुंडलिनी योग गर्दा नोक्सानी पनि हुन सक्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित मिति: Apr 26, 2021
कोरोनामुक्त हुन होम आइसोलेशनमा बस्ने संक्रमितले यस्ता औषधि प्रयोग गरौँ !
नेपालमा कोरोना संक्रमण अहिले एकदमै फैलिएको छ । जसमध्ये धेरैजसो होम आइसोलेशनमा छन् । कोरोना
के शरीरमा निलो दाग देखिन्छ? सावधान् तपाईलाई यी जटिल रोग लाग्न सक्छ !
हाम्रो शरीरमा केहिले काही निलो दाग देखिने गर्छ । प्रायजसो हामी बेलुका सुत्दा कुनै त्यस्तो
के तपाई काखी कालो भएर दिक्क हुनुहुन्छ ? जान्नुहोस् यसबाट छुटकारा पाउने उपायहरु!
सामान्यतया हाम्रो काखीको रंग कालो हुने गर्छ । किन हाम्रो शरीरको दाँजोमा काखीको रंग कालो
निषेधाज्ञाको बेला के तपाई घरमा बसिरहँदा दिक्क हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस् समय बिताउन !
यतिबेला कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ । काठमाडौं उपत्याकासहित मुलुकका प्रायजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञाको
मकै खादाँ हुन्छन् यस्ता फाइदा जान्नुहोस् !
मकै भन्ने बितिकै हामी सबैजसोलाई थाहा भएको बाली हो । यो संसारमा सबै भन्दा धेरै